सुशान्तलाइ देहत्याग गर्न बा’ध्य पार्ने भारतका यी चर्चित सुपरस्टारको नाम आयो अगाडी – Jagaran Nepal
बलिउड कलाकार सुशान्त राजपुतले देहत्याग गरेपछि अहिले मि टु अभियान जस्तै बलिउडका फिल्म कलाकारहरुले पनि आफु माथि परेको अन्यायका बारेमा आफ्ना अनुभव शेयर गरेका छन् । शुसान्त राजपुतको निधनमा बलिउडका दिग्गज मानिने कलाकारहरुको रवैया र ब्यवहार कारण नयाँ कलाकारहरुले यस्तो निर्णय लिन बाध्य हुने गरोको अभिब्यक्ती आएका छन् । १० वर्ष अघि दबंग फिल्मको निर्देशन गरेका निर्देशकले आफ्नो १० वर्षको लामो समयमा यस्ता कलाकार र परिवारवादका कारण आफुले पाएको यातनाका बारेमा खुलेर लेखेका छन् ।
अर्की अभिनेत्री कंगना रनावतले पनि वलिउडमा परिवारवादका कारण अन्य कलाकारले अपहेलनाको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेकी छन् । कंगनावाट सुरु भएको यस्तो अभियानमा अहिले धेरै कलाकार सहभागी भएका छन् । अर्का एक कलाकारले पनि आफु कसरी सलमान खान र शाहरुक खान जस्ता कलाकारका कारण छाँयामा परें भन्ने कुराको खुलासा गरेका छन् । सलमान र शाहरुखसंग प्रकाशन भएको एउटा म्यागजिनको कभर फोटो शेयर गर्दै उनले उनीहरुबाटै आफ्नो करियरमा धक्का पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
नाम उल्लेख नगरी उनले तस्बिर शेयर गरेर आफ्ना खराव अनुभव शेयर गरेका छन् । अभिनेता साहिल खानले तस्बिर शेयर गर्दै लेखेका छन्, जिन्दगीमा यस्तो पनि हुन्छ की आफ्नो पहिलो फिल्म पछि नै भारतका ठूलो सुपरस्टारका साथमा भारतकै सबैभन्दा ठूलो फिल्म म्यागेजिनमा कभर तस्बिर छापिएको होस् । उनी अगाडी लेख्छन् बलिउडका कलाकार सुशान्त राजपुतको निधन पछि बलिउड भित्रको यस्तो साँचो कुरा बाहिर आएको छ कि जुन कुरा धेरैलाई थाहा थिएन ।
ग्ल्यामर क्षेत्रमा चमकदार जिवनको पछाडी लुकेको यस्तो तितो साँचो अहिले विस्तारै बाहिर आउँदै छ । धेरै कलाकारले सुशान्तको निधन पछि आफुले भोगेका यस्ता अनुभव सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिरहेका छन् । फिल्म स्टाइलवाट फिल्म क्षेत्रमा नाम कमाएका नायक साहिलले पनि आफ्नो अनुभव शेयर गर्दै लेखेका छन । उनले सलमान खान र शाहरुख खा प्रति अप्रत्यक्ष संकैत गर्दै उनीहरुका कारण धेरै कलाकारको भविष्य वर्वाद भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले यि दुई कलाकारसंगै आफ्नो तस्बिर रहेको पोष्टर शेयर गर्दै लेखिएको क्याप्सनमा विशेष जोड दिएका छन्, जसमा लेखिएको थियो फिल्म क्षेत्रमा अर्को एउटा खान आएको छ ।
उनले आफुसंग भएका यि दुई सलमान र शाहरुख मध्य एकजना कलाकारलाई फोटोमा लेखिएको क्याप्सन प्रति आपत्ती भएको उल्लेख गरेका छन् । ति त्यस्ता कलाकार हुन् जसले फिल्म क्षेत्रमा अरु कोही आएर चर्चीत होस् भन्ने चाहन्नथे । ति ब्यक्ति को हुन् ? उनले स्टाटसमा लेखेका छन् । म त निकै सानो थिए, नयाँ कलाकार थिए तर पनि यि चर्चीत कलाकारलाई म बलिउडमा आएको प्रति डर किन ? उनको प्रश्न छ । उनले यि कलाकारका कारण आफु पनि डि प्रेशनमा गएको बताएका छन् ।
उनले आफुलाई त्यसपछि यि कलाकारले कहिले साइड रोलको लागि बोलाउने, कहिले टिभी शोका लागि बोलाउने गर्न थालेको बताएका छन् । यिनीहरुको समुहले आफुलाई कति फिल्मवाट निकालिदिएको पनि साहिलले बताएका छन् । सुशान्तलाई जस्तै मलाई पनि गरेका थिए उनी लेख्छन् तर मलाई अब केही फरक पर्दैन, किनकी सुशान्तले यिनीहरुको असली अनुहार सबैको सामु देखाइदिएका छन् । यिनीहरु नयाँ कलाकार र अरुको पौरख देखि कति डराउँछन् भन्ने कुराको उदाहरण हो । साहिलले फिल्म क्षेत्रमा जान अब्राहम बाहेक कोही पनि नयाँ ब्यक्ति फिल्म क्षेत्रमा नआएको र त्यसो हुनुमा यि कलाकारहरु नै अरुलाई आउन नदिने गरेको बताएका छन् ।
त्यस्तै फिल्म दबंगका निर्देशक अभिनव कश्यपले लेखेको एउटा लामो स्टाटसले वलिउड फिल्म भित्रका धेरै कर्तुतहरुका बारेमा उजागर गरेको छ । अभिनेता सुशान्त राजपुतको निधन पछि उनले सुशान्तले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडीको निकै दर्दनाक कहानी प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यस्तै बलिउड अभिनेता सलमान खान, निर्माता तथा निर्देशकहरू करन जोहर, एकता कपुर तथा सञ्जयलीला भन्साली सहित आठ जना विरूद्ध फौजदारी मुद्दा परेको छ। बुधबार एक वकिलले उनीहरूलाई अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको मृ त्युको कारण भन्दै बिहार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार वकिल सुधिर कुमार ओझाले सलमान, करनसहित आठ जनाका विरूद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्। अदालतले आगामी जुलाई ३ को सुनुवाइ मिति दिएको छ। ओझाले दायर गरेको मुद्दामा आदित्य चोपडा, साजिद नाडियडवाला, भुषण कुमार र निर्देशक दिनेशको पनि नाम छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार यी आठ व्यक्तिले सुशान्तका फिल्म रिलिज हुन बाधा पैदा गरेको र यिनीहरूकै कारण सुशान्तलाई फिल्मी कार्यक्रमहरूमा पनि बोलाउन छाडिएको मुद्दामा उल्लेख छ।
वकिल ओझाका अनुसार उनले सेक्सन ३०६, १०९, ५०४ र ५०६ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेका हुन्। यसका साथै उनले साक्षीको सूचीमा अभिनेत्री कंगना रनावतको नाम राखेका छन्। अभिनेता सुशान्तसिंहले गत आइतबार मुम्बईस्थित आफ्नै फ्ल्याटमा मृत भेटिएका थिए।